Xiaomi သည်မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်မက်ဒရစ်မြို့၌တတိယမြောက်စတိုးဖွင့်လှစ်တော့မည် Androidsis
Xiaomi သည်မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်မက်ဒရစ်မြို့၌၎င်း၏စတိုးဆိုင်သစ်ကိုဖွင့်မည်
နို ၀ င်ဘာလမှာသူတို့ပထမဆုံးစတိုးဆိုင်ဖွင့်ကတည်းက Xiaomi သည်စပိန်ဈေးကွက်တွင်အကြီးအကျယ်လောင်းထားသည်ရန် တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်၎င်း၏အစီအစဉ်များကိုတစ်နိုင်ငံလုံးသို့ပြန့်နှံ့ရန်အစကတည်းကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ကနောက်ထပ်နှစ်ခုစတိုးဆိုင်များဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်သောအရာတစ်ခုခု။ ဘာစီလိုနာတွင်နောက်ဆုံးပေါ်၊ MWC 2018. အတွက်အချိန်မီဖြစ်သည်။ စတိုးဆိုင်အသစ်ရဲ့အလှည့်ရောက်လာပြီ.
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Xiaomi ကမက်ဒရစ်မြို့မှာသူ့ရဲ့စတိုးဆိုင်အသစ်ဖွင့်လှစ်မှုကိုအတည်ပြုပြီးသားပါ။ မြို့တော်တတိယနှင့်စပိန်အတွက်စုစုပေါင်းစတုတ္ထ။ ဒါ့အပြင်ဒီစတိုးဆိုင်ဖွင့်ပွဲကသိပ်မဝေးတော့ဘူး။ ကွန်ကရစ်ဖြစ်ရန် မတ်လ 17.
၎င်းကိုစပိန်ရှိ Xiaomi ၏တွစ်တာတွင်တရားဝင်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေသောသတင်းစကားတစ်ခုတွင်အဖွင့်ရက်နှင့်စတိုးဆိုင်တည်နေရာကိုအတည်ပြုပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် San Sebastián de los Reyes ရှိ Plaza Norte2ဈေးဝယ်စင်တာတွင်ရှိသည်.
ငါတို့တတိယဆိုင်ကိုမြို့တော်မှာဖွင့်တယ်။ မတ်လ ၁၇ ရက်၊ စနေနေ့၊ CC Pza Norte2တွင်သင့်ကိုလုံခြုံသောဆုများနှင့်အံ့သြဖွယ်ရာများဖြင့်စောင့်ဆိုင်းနေပါသည်။ ဒါကိုလက်လွတ်မထားပါနဲ့ #XiaomiMAD pic.twitter.com/ZPmiBr932f
- ကျွန်ုပ်၏စပိန် (@XiaomiEspana) မတ်လ 8, 2018
မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် ၁၂း၀၀ နာရီတွင်စပိန်တွင်စတုတ္ထမြောက် Xiaomi စတိုးကိုတရားဝင်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဖုန်းများကိုဤစတိုးဆိုင်အသစ်တွင်ရောင်းရန်မျှော်လင့်ရသည်။ အခြားထုတ်ကုန်များလည်းရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်ပေမယ့်။ ဘာစီလိုနာစတိုးမှာလိုပဲ အများဆုံးဖွယ်ရှိရုပ်မြင်သံကြားလည်းရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။
Xiaomi ကစပိန်နိုင်ငံကိုတိုးချဲ့ချင်တယ်ဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်။ သူတို့သည်စတိုးဆိုင်များဖွင့်လှစ်ခြင်းအပေါ်အကြီးအကျယ်လောင်းနေကြသည်။ တကယ်တော့ဒီနှစ်မှာတော့စတိုးဆိုင်တွေဖွင့်ဖို့မျှော်လင့်ထားတယ်။ တောင်မှပြောထားသည် နွေရာသီကိုမျှော်လင့်လျက်နောက်ထပ်အဖွင့်ကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောတည်နေရာအကြောင်းကိုနောက်တဖန်မသိရ။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရက်စွဲကိုပြက္ခဒိန်တွင်ရေးရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်ကျော်အတွင်း၊ မတ်လ ၁၇ ရက်တွင်စပိန်ရှိ Xiaomi စတိုးဆိုင်သစ်သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်. ဒီဖွင့်လှစ်မှုအသစ်ကိုခင်ဗျားဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Xiaomi သည်မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင်မက်ဒရစ်မြို့၌၎င်း၏စတိုးဆိုင်သစ်ကိုဖွင့်မည်
Android P ကို ​​Nexus သို့မပို့ပါ
Facebook Messenger Lite တွင်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများပါရှိသည်